Muva nje, i-celadon kwaduma kakhulu. Isetshenziselwa abaklami abaningi futhi abaklami ukudala amaqoqo kwabo izingubo, abaklami ingaphakathi - at ukubhalisa kwezakhiwo kanye nezindawo into design. Noma kunjalo, abaningi musa alinge ukusebenzisa lolu umbala izikhala lawo lokuphumula, bakubheka njengobuthakathaka esikhanya kakhulu futhi okungafanele.
Labo cha landela izimfashini zamuva, futhi 'baqaphe "usebenzisa umbala aqua elingaphakathi kuphela izesekeli, noma izingxenye ngazinye, uma kungekhona ngaphandle kusuka palette izakhiwo design. Kodwa-ke yize! Phela, wayehawukela has a lot of izinzuzo. Lokhu ububanzi kumele ukuthula kwengqondo nokuzola, kunomphumela ukunciphisa, ilungisa ukuzindla buthule, kuyasiza ukuvusa umcabango. Isici esiyinhloko - futhi ahlotshiswe upende njengale ngeke ziphinde bheka ezishibhile noma inhlamba.
The elingaphakathi, eklanyelwe in isitayela zakudala, lokhu umbala libukeke ikakhulukazi lihambisana igolide kanye shades brown noma beige. Finishing izindonga wallpapered nge isithombe esikhulu, ixazululwe kulezi inhlanganisela umbala, khumbula bendabuko yendwangu trellis futhi esinjengesasebukhosini eziphilayo boudoirs.
Celadon has ukufana ngamatshe semiprecious, okuyinto eyenzeka ekuqaleni ezivela eMpumalanga. Ngakho ngokuvamile, thina iyihlanganise ne isitayela kula mazwe. Ukusebenzisa i-celadon ayegcwele kuhlangene shades of izimbali elikhanyayo oluhlaza okotshani, nsomi yellow, ungenza amanothi kwemizwa Oriental wezangaphakathi. Ukwengezwa esikhaleni design kungaba izinto zokuhlobisa eyenziwe lesikhumba noma mbumbulu oluluhlaza.
lasolwandle blue kuhlangene ezimhlophe liletha umuzwa freshness, nobumsulwa ukudlala. Okuthile kusikhumbuza Motifs zasolwandle, ebusweni nasici olwandle futhi ukuchuma kwemizwelo ehlobo. Ukusebenzisa njengoba ezengeziwe shades of blue noma oluhlaza, ungakha imvelo ezolile. Uma ukubukeka sengathi ezinombala ofanayo kakhulu, ungakwazi ukwengeza ezihlukahlukene ngokusebenzisa izesekeli. Ngokwesibonelo, ukubeka phezu kodonga, ababethi-celadon, elithi isithombe namathafa ezicacile noma imidwebo ne ayekhulekela ngesineke.
Ngo lukaKhisimusi ingaphakathi alube beige umbala uhla lokusentshenziswa zolwandle ezihlukahlukene nangezindlela uzokwenza buhle ezithile.
Kubukeka inhlanganisela olubabazeka kakhulu imibala nge grey omnyama noma amnyama. A ibhekwa ngesimo izinkuni zemvelo ukuthungwa kunenzuzo ukugcizelela lezi imibala emibili. Yenza isikhala egumbini ibe banzi futhi ukukhanya, ungasebenzisa predominance elimhlophe futhi Ukunquma izakhi amathoni gray kanye oluluhlaza.
Ngaphezu kwalokho, i-celadon kahle shades ocebile obomvu, onsomi noma orange. Omunye izimfashini zamuva ukuhlukanisa ukusetshenziswa coral umbala onsundu uthulisiwe.
Kunoma ikuphi, noma umbala inhlanganisela obakhethayo, ungesabi ukuba ulinge futhi baveze imizwa yabo!
Interior elilodwa elalingaphandle efulethini
Village izindlu - ukuphakama emaqaqasini esidlule
Boho - isitayela ezakhiweni ingaphakathi. Amathrendi Ukhiye
Izinketho panel ekhishini
Interior ekhishini ngesitayela classical - uphawu zizwakale kahle
Magic, okuyinto imali enkulu "I-Scarlet Ulibangisa" Green: isifinyezo sezinto indaba
Prostration indlela yokukwenza kwesokudla eSontweni Lobu-Orthodox? Lapho ukwenza prostrations e izimfundiso? Uma ungakwazi ukwenza prostrations? Ingabe kungenzeka emva iSidlo ukwenza prostrations?
Halala ngoSuku umakhi
Yiziphi Chandeliers yesimanje